Elle Macpherson Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
musha United Kingdom Fomura Imwe Dhiraivha Lewis Hamilton Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Yedu Lewis Hamilton Biography inokuudza Chokwadi nezveNyaya yake Yehudiki, Hupenyu hwepakutanga. Kunyanya zvakadaro, Vabereki vaLewis Hamilton, Mhuri, Vasikana / mukadzi kuve. Mararamiro ake, Net Worth uye Hupenyu hweMunhu.
Muchidimbu, tinokupa iyo Yakazara Nhoroondo yaLewis Hamilton. Mutyairi wemujaho weBritish uyo anozivikanwa nezita remadunhurirwa “Bhiriyoni Wemadhora”.
Zvinotanga kubva pamazuva ake ekutanga, kusvika paakave nemukurumbira neFormula One. Isu tinokupa iwe kuravira kwekuita hunhu hweLewis Hamilton's Bio.
Hongu, munhu wese anoziva nezve hutongi hwake hunotevedzana muFormula One racing. Imwe inofananidzwa ne Michael Schumacher.
Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Lewis Hamilton's Biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Lewis Hamilton Yemwana Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
F1 Legend Lewis Hamilton akaberekwa musi we 7th waJanuary 1985. Nzvimbo yake yekuzvarwa iri muStevenage, United Kingdom.
Lewis Hamilton akaberekwa nababa vake, Anthony Hamilton - mutema-British. Uye kuna amai vake Carmen Larbalestier - wedzinza rakazara reBritish- (vose vari pamufananidzo pazasi).
Kukura pa Stevenage vechiduku Hamilton havana kumbofambidzana nekambani imwechete yababa naamai vake nekuda kwekuti vabereki vose vakaparadzana apo Hamilton aingova nemakore 2 chete.
Tichifunga nezve hunyoro Hamilton aive panguva iyoyo, baba vake vakasarudza kumurega agare naamai vake asi haana kumbomira kudira rudo rwababa paari kusanganisira kumupa mota inotaridzwa neredhiyo, chipo icho chingazopisa kuda kwaHamilton kwekumhanya uye kuwedzera kukwira kune mukurumbira.
Zvisinei, rwendo rwaHamilton kumukurumbira haruna kukurumidza asi kufambira mberi. Mushure mekuve nenguva yakawanda yekutamba nemota yekudzora redhiyo, Anthony akapa kuda kwemwanakomana wake kwekumhanyisa kukurudzira nekumupa Go-Kart iyo yakamupa ruzivo rwechokwadi rwemujaho.
Lewis Hamilton Biography Chokwadi - Basa Rekuvaka:
Kuva neGo-Kart yakavhura mikova yemakwikwi ayo Hamilton akashandisa nekukwikwidza muKart Circuits. Izvo zvese zvakatanga kubva ku Rye House Kart apo akazviratidza semurwi wekumhanya wekutarisa kuburikidza nekukunda michindano.
Kukunda hakuna kungomuwanisa mukurumbira wemuno asi kwakakonzera sarudzo yake yekumhanyisa mujaho sekukwikwidza nhabvu, mutambo waakatora chikamu muJohn Henry Newman Chikoro aine tarisiro yekuve nyanzvi.
Charles Leclerc Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Akabatwa nemazita asingaverengwi eKarting ayo akamuona ainzi Karting mutambi we nguva dzose (anbeaten rekodi iye achiri kutora), Hamilton aive nechivimbo chekuti upenyu hwakange hupi mumatoro kwaari mukukwikwidza uye akatsvaka kufambira mberi muFormula Renault.
Lewis Hamilton Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau:
Kunyangwe Hamilton akaita foray yake muFormula Renault mu2001 paakanga ave nemakore gumi nematanhatu, zviitiko zvakamugonesa kupinda mumakwikwi kwaive kuvimba kwake (kwakakonzerwa nemazita mazhinji emitambo) kuti azvizivise kumukuru weboka reMcLaren Ron Dennis pamhemberero yemubairo paaka anga aine makore mapfumbamwe muna 16.
Sumo iyo Hamilton yaizorarama kuti arangarire makore akatevera:
"Mhoro. Ndiri Lewis Hamilton. Ndakakunda mupepeti hweBritain uye rimwe zuva ndinoda kumhanya motokari dzenyu. "
Ron Dennis (akafananidzirwa pazasi naHamilton panguva yekusumwa) akashamiswa nekuvimba kwakaburitswa naHamilton uye akafanoona ramangwana rakajeka mumukomana.
Nekudaro, akave nechokwadi chekuti mujaho wekumhanya wakanakidzwa nerutsigiro rwechikwata cheMcLaren icho muna 2001 chakamupa mukana wekutora danho rakakura pabasa rake rekumhanya nekukwikwidza muFormula Renault.
Hamilton akaratidza kuti McLaren patronage iyo yaisanganisira rubatsiro rwemari uye tarisiro yakajeka yokukwikwidzana mune imwe yepamusoro yakanga yakakosha sezvo akapedza chikamu muChnUMX British Formula Renault Winter Series, akauya rwechitatu mu 2001 Formula Renault UK campaign uye pakupedzisira akakunda mupiro mu2002.
Akazotevera makwikwi emujaho akamuona achisimuka kubudikidza neFormulaThreee, GP2, ndokumurova akatanga rake Formula Rimwe basa naMcLaren muna 2007, achipedza wechipiri mumwaka wake wekutanga uye kuhwina mukombe mwaka unotevera. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Lewis Hamilton Rudo Hupenyu:
Mumwe anogona kunge asina kukanganisa kupa hunhu hwaHamilton hwehukama hwakakundikana kumuchato wemubereki wake wakakundikana. Iyo yekumhanya shasha yakave nematambudziko makuru mukuyedza kuita kuti hukama hwake hushande. Izvo zvakanyanya zvaanoedza, zvakanyanya kutadza.
Lewis akatanga ukama hwake nemutungamiri mukuru weAmerican girl band, Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger munaNovember 2007 asi yakaputsa munaJanuary 2010 kuitira chinangwa chekuwana nguva yevatarisi vavo.
Zvisinei, vakaonekwa pamwechete pa 2010 Turkish Turkish Grand Prix uye at Canadian Grand Prix kuMontreal, musi wa13 Gumiguru 2010, zvichimutsa fungidziro yekuti vange vadzokerana.
Mushure memutsara we "break-ups uye make-ups" yakatevera pakati pe2011 na2013, murume nomudzimai vakapedzisira vaputsa muna February 2015. Achirondedzera motokari dzake sevana vake, Hamilton akabvuma kuti kuda kwake kumhanya kunouya pakutanga, izvo pasina mubvunzo nei akaparadzanisa na Nicole.
Humwe hunhu hunoshamisa hwevakadzi hwakambomira nehukama hwakaganhurwa naHamilton panguva yekudanana naye anosanganisira Jodia Ma, wake wekutanga wekuChina waaidanana naye kukoreji.
Vakafambidzana kwemakore mana, kusvika munaJune 2007 pavakazoparadzanisa nzira vanosanganisira muimbi weAmerica, Rihanna, Model Sofia Richie ane makore gumi nemasere, Winnie Harlow pakati pevamwe.
Lewis Hamilton Hupenyu Hwemhuri:
Lewis Hamilton hupenyu hwemhuri hwakaoma zvakaoma sehupenyu hwehukama hwake. Gara shure apo isu tichifamba iwe kuburikidza nechisimba chake chemhuri.
Nezve Lewis Hamilton Baba:
Anthony Hamilton, baba vaLewis Hamilton ndiye black British. Akagara achitsigira chishuwo chemwanakomana wake uye basa rake semumhanyi wemotokari.
Anthony Hamilton anga ari Lewis 'maneja wega kubva muna2008 kusvika pakutanga kwegore ra2010 apo Lewis akapedza hukama hwake hwekushanda nababa vake ndokusaina chibvumirano chitsva chemaneja Simon Fulleryakasimba XIX Entertainment muna March 2011.
Nezve Lewis Hamilton Amai:
Mukushamisa kwezviitiko zvezviitiko, Lewis ane vanaamai vaviri. Imwe, yake yehupenyu, imwe, nhanho yake. Carmen B. Larbalestier, amai vaHamilton venyama, anova muchena weBritish akazvarwa muna 1955. Akaroora Anthony C Hamilton muna 1979.
Ivo, zvakadaro, vakarambana, makore maviri mushure mekuzvarwa kwaLewis. Parizvino akaroora saCarmen Brenda Lockhart, ane vana vatatu vanosanganisira Lewis Hamilton, Nicola Lockhart naSamantha Lockhart.
Hamilton ave neukama hwakanaka nemudzimai wake. Akave achionekwa kakawanda pane mamwe emakwikwi ake makuru uyewo pamakwikwi anopa rutsigiro rwetsika kumwanakomana wake uyo asina kukundikana kuita kuti azvirumbidze.
Linda Hamilton ndiye Amai vokurera vaLewis Hamilton. Akaroora Anthony Hamilton mushure mekunge aparadzana naamai vaLewis chaivo.
Lewis pazera regumi nemaviri akatanga kugara naye pamwe nehafu-mukoma mushure mekunge asiya amai vake. Akabatsira kusimudza Lewis pamwe nekutsigira basa rake.
Nicolas Hamilton ndiye hafu-hama yaLee Lewis. Anoberekerwa naLee nyamukuru, Linda. Nicholas anozvidzivirirawo mutyairi wepamberi. Ane chirwere cheperesi uye ane motokari yakagadzirirwa yaanoshandisa kumarudzi ake nekuda kwechiitiko chake.
Lewis Hamilton Biography - Tsaona Dzinokosha:
Mumwe weLee Lewis Hamilton ngozi dzinoshamisa dzinosanganisira izvo zvaaiva nazvo naMax Verstappen muBairrain Grand Prix kare mu 2018. Lewis akange aine mhosva pamusana pekupa mhosva mutyairi wechidiki.
Hamilton, ane makore makumi matatu nematatu panguva iyoyo aitaura izvi nezveVerstappen ane makore makumi maviri-makore achitaura zera remudiki pachiitiko ichi.
"Ini ndinongomufungira, iye mutyairi mudiki uye achange achidzidza nguva dzese, ane nhanho yakanaka asi, sevechidiki, hatigare tichiita sarudzo dzakanaka"
Pakave nedzimwe marudzi apo Lewis akanga ari pedyo zvikuru nekubatanidzwa mukudengenyeka asi iye neimwe nzira anopukunyuka ndokuguma achikunda dzinza.
Lewis Hamilton Biography Chokwadi - Kwete Kungomhanya:
Kupesana nemafungiro evazhinji, Hamilton haazi mujaho chete asi munyori wenziyo uye ane makore ekunyora achinyora, mumhando dzakasiyana, dzenziyo makumi masere. Iye anoimbawo zhinji dzenziyo dzaanonyora munguva yake yekusarudzika.
Nekuda kwebasa rake semumhanyi wemotokari, haana kunyatsoteerera kumimhanzi sezvaanoona kumhanya kuchikosha. Muna 2015, akashanda pamwe naBose & Spinz Beats Inc kuti agadzire yake F1 soundtrack iyo yaakaburitsa munaGunyana gore iro.
Lewis Hamilton Biography Chokwadi:
Hamilton akaenda kumakirasi eKarate aine makore mashanu kuti akwanise kuzvidzivirira kana vanodheerera vauya kuzoshevedza
Aive akabhadharwa mari yepamusoro muBritain Sportsman mu2008.
Mune nhoroondo yemutambo, Hamilton ndiye chete mutyairi wekuhwina kana kamwe mujaho mumwaka wega wega waakakwikwidza nawo.
Hamilton ave ari mudzimu weArsenal wakasimba kubva pazera remakore mashanu. Iye akatoita mutambo wekambani kweboka rake rechikoro pamwe chete nomudzimai weEngland wenyika yose, Ashley Young.
Akave nenguva yakareba uye achiita semhirizhonga isingagumi naFerrari mutyairi, Sebastian Vettel
Sebastian Vettel Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CHOKWADI CHINOGONA: Vongai nekuverenga kwedu Lewis Hamilton Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Yeudiki Biography Diary- yeFOMULA YEMWE DIVI
1 gore rakapera
Yakasarudzika uye yakarongeka biography yakaenzana nenzira imwecheteyo SKY Fomula Imwe yekutsanangura haiendese chero chinhu imhosva yake nezvimwewo Zvichida mitambo yemuchadenga iri kuronga kumubhadharira iye Trump weBritain.
Dai 17, 2022
Dai 18, 2022
Dai 3, 2022